❤ IParadesi yaseMaravu ❤ Ichibi elikhulu - Ulwandle - iTerrace
Ultra Private Lagoon-side Tropical Island Retreat kunye 180 ° iimbono eziphefumlayo
✔ Villa 300+ m2 ✔ 2 iihektare zaBucala ✔ I-Horizon Edge Pool ✔ Kufuphi noLwandle ✔ Iilwandle kumgama wokuHamba ✔ I-Snorkelling kwi-Walking Distance ✔ Big Terrace ✔ Igadi yabucala ✔ Iindawo zokuchithela iiholide/indawo zokutyela ezikufuphi ✔ 15 imiz ukuya kwisikhululo seenqwelomoya ✔ 20 imiz ukuya eSavusa Idolophu ✔ Ibonelela ukuya kuthi ga kwi-4 yabantu abadala kunye nabantwana aba-2
Eli khaya labucala lanamhlanje eliphangaleleyo leemitha ezingama-400 ezikwimitha engama-45 ngaphezulu kwechibi elihle, eliSekelwe kwaye lihlala ngothando "kwiParadesi efihlakeleyo" yaseFiji.
Icala lolwandle legumbi ngalinye lokulala kunye negumbi lokuhlala livuleleke ngokupheleleyo kwiiveranda nganye inombono we-180 degree of reef, iziqithi kunye nolwandle olungaphaya kokufikelela elundini.
Ikhaya lijonge kubunzulu obuziimitha ezili-15 nge-7.5 yeemitha ze-freeform infinity pool egrunjwe kulo yaza yafakwa kwi-rock substrate. Iqula libonakala lidibana nolwandle.
Igazebo enkulu efulelwe ngengca ijinga phezu kwedama kwaye yeyona ndawo ifanelekileyo ukonwabela impepho ngelixa ubukele ukutshona kwelanga.
IGadi yabucala yaseMaravu Paradise ihonjiswe ngeentlobo ngeentlobo zemithi yesundu esele ikhulile, izihlahla zokuhombisa, iintyatyambo ezininzi zetropikhi kunye nemithi yeziqhamo, efana neepapaya, iibhanana, iziqhamo zothando, iipayinapile kunye neeavokhado kunye nekhokhonathi.
Izixhobo: I-air conditioner, i-Apple TV, i-wifi, umatshini wokuhlamba, isomisi, i-BBQ grill, izomisi zeenwele, iifeni
Ikhitshi: i-oveni, isitovu soveliso, izixhobo zokuhlamba izitya, iMicro-wave, iketile, itoaster, isihluzo samanzi, iimbiza neepani, izinto zokunqunqa, iziqholo ezisisiseko.
Ilungiselelo lokulala: I-villa inokubonelela ngokukhululeka abantu abadala aba-4 kunye namagumbi ayo okulala amabini. I-sofa ye-queen eguquguqukayo ibekwe kwigumbi ngalinye lokulala ukuze ibonelele abantwana okanye amalungu eendwendwe ezongezelelweyo xa eceliwe.
✔ umgama wokuhamba ukuya elunxwemeni lwasekhaya / indawo yokuntywila emanzini
✔ 3 min drive ukuya eVaga Garden ejongene neBeach/Rainforest Walk
✔ imizuzu emi-3 ukuqhuba ukuya eKoro Sun Resort (Iindawo zokutyela/iiBhara)
✔ Imizuzu eyi-15 ukuya kwisikhululo seenqwelomoya saseSavusavu (bhabha uye eNadi ngemizuzu engama-50)
✔ imizuzu engama-20 ukuya eSavusavu eDolophini eMazantsi (Iindawo zokutyela/iivenkile/iivenkile ezinkulu/iiATM)
Andizukubakho kwi-villa, kodwa ihlala ikhona kuyo nayiphi na imibuzo kunye neengcebiso :)
Isikhokelo esincinci sokhenketho se-Savusavu siya kuthunyelwa kuwe malunga neveki enye phambi kokufika kwakho, sibandakanya izinto ezinomtsalane kunye neendawo onokuzindwendwela kwindawo leyo, kunye nolwazi oluluncedo ngokubanzi.
Isikhokelo esincinci sokhenketho se-Savusavu siya kuthunyelwa kuwe malunga neveki eny…